Zirconium Boride Powder, ZrB2 - Goodao Technology Co, Ltd.
molecular fomula Zrb2
CAS Nhamba 12045-64-6
Unhu grey nhema simba
Metting poindi 3040'C
Kuwandisa 6. g / cm3.
Zvishandiso inogona kushandiswa seyerospace yakanyanya tembiricha zvinhu, yekupfeka-resistantsmooth solid zvinhu, yekucheka maturusi, thermocouple thermocouple dziviriro uyeelectrolytic yakanyunguduka macomputer eiyo electrode zvinhu. Kunyanya kukodzera kushandiswa sechinhu chinotenderera chinotakura bhora
CAS Kwete: 12045-64-6
EINECS Kwete.: 234-963-5
Molecular fomura: ZrB2
Molecular uremu 112.84
Kuwanda kwe4.52g / cm3
Nzvimbo yakanyunguduka (3040 ℃)
Iyo ine yakaoma kuomarara uye iri quasi simbi yakakomberedzwa ine hexagonal mamiriro
1. Indasitiri Yemuchadenga
ZrB2 akateedzana macomposites akakodzera kwazvo kushandiswa kweiyo ultra-yakakwira tembiricha zero ablation zvinhu zve supersonic spacecraft uye missile makomba nekuda kwenzvimbo yavo yakanyunguduka, kuomarara kwakanyanya, kuitisa kwakanaka uye kugona kugona kwekudzora neutron. Kunyanya nekukurumidza kukurumidza kwe rocket uye missile tekinoroji, kudiwa kwepamusoro tembiricha mamiriro ezve zirconium borate yakavakirwa keramiki iri kukurumidza. Nekudzika kwekutsvagisa nekusimudzira basa uye nekuenderera mberi kwekuvandudza kweyekugadzira tekinoroji, zvine chokwadi chekuti kutsvagisa, kugadzirwa uye kushandiswa kweZrB2 dzakateedzana zvikamu zvinokwakuka kumberi nhanho nyowani.
Zirconium diboride (ZrB2) ine nzvimbo yakanyunguduka yakakwira, modulus yakakwira, kuomarara kwakanyanya, kupisa kwakapisa kwemagetsi uye kutenderera kwemagetsi, uye yakanaka yekupisa yekushamisa kwekushomeka nekuda kwesimba rayo rakasimba remakemikari. Ive chave chinonyanya kugona kukwikwidza zvinhu kune Ultra-yakakwira tembiricha ceramics. ZrB2 zvedongo zvigadzirwa zvave zvichishandiswa zvakanyanya seyakanyanya-tembiricha masisitimu uye anoshanda zvinhu, senge turbine mashizha uye
MHD magetsi emagetsi emagetsi muindasitiri yekuvhiya. Uye zvakare, ichienzaniswa nezvakawanda zvedongo zvinhu, ine iri nani magetsi kuitisa, uye inogona kuburitsa zvikamu zvine yakaoma maumbirwo netambo yekucheka tekinoroji. Zvisinei, ZrB2 ine nzvimbo yakanyunguduka yakakwira, yakaoma panguva yekutsvaira uye simba rakadzikira uye kuomarara, izvo zvinokanganisa mashandisiro ayo munzvimbo yakaoma yekushanda. Nechikonzero ichi, vadzidzi vekumba nekune dzimwe nyika vaita yakawanda yekutsvagisa basa paZrB2 zvinoumbwa nezvimwe zvinhu vachishandisa akasiyana epamberi sintering maitiro, kuti vagadzirise zvakakwana zvivakwa zvezvinhu. Mune ino bepa, ZrB2 zvinoumbwa uye yavo densification inoongororwa.
ZrB2 zvedongo chinhu chakanakisa, chakasarudzika zvinhu, izvo zvinogona kushandiswa senge yakakwira tembiricha thermocouple yekudzivirira ruoko, kukanda muforoma, metallurgical simbi Kukuru Mukutonga kwechiFascist, nezvimwewo nekuda kwekudzivirira kwayo mhepo uye kuitisa, zvinofanirwa kushanda pamwe nealuminium oxide yemukati chubhu kutakura. kunze kunoshanda tembiricha kuyerwa kana uchishanda seye thermocouple. Iyo thermowell yakagadzirwa neichi chinhu inogona kushandiswa ichienderera kwenguva yakareba musimbi yakanyungudutswa nendarira. ZrB2 ceramics inogona zvakare kushandiswa se antioxidants mune zvinopesana. LV Chunyan et al. akataura izvozvo nekuwedzera
ZrB2 kune MgO-C inoratidzira kana kushandisa zvakananga ZrB2 sehuwandu kana hupfu hwakatsetseka. Inoita Refractory zvidhinha uye inokanda uye inoratidza yakanaka kwazvo oxidation kuramba uye kupisa moto kuita. Iyo oxidation yekudzivirira michina inogona kuongororwa seinotevera: B2O3 inogadzirwa neZrB2 oxidation pane yepakati tembiricha mafomu mgo-b2o3 yakaumbwa chikamu muMGO-C, nekudaro ichidzivirira chidhinha.
3 electrode zvinhu
Yakadzika conductivity, magetsi shanduko system is electron shanduko. inokodzera yekuonana zvinhu uye electrode zvinhu nekuda kwayo yakaderera resistivity uye yemagetsi kuitisa mashandiro. Inogona kushandiswa mu electrode uye yakanyanya kupisa tembiricha chinhu chesimbi thermocouple. Muna 1994, Feng Dagan akagadzira mhando yethermoelectric vaviri zvinhu zveZrB2 uye graphite, iyo inogona kushanda mukusanganisa mhepo pa1200 ~ 1600 ℃
Kana tembiricha iri 1 600 ℃, inogona kusvika ingangoita 70 MV uye iyo thermoelectric simba chiyero chiri 55 μ V / ℃. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti kugona kwethermoelectric ndeyekukosha kweimwe basa neine mutsara wakanaka. Kudzokororwa kwesimba kwethermoelectric iri 1% ~ 1.5% yeiyo tembiricha yakayerwa mushure mekuyedzwa kwakawanda mumhepo yakasanganiswa. Iko kushanduka kukuru kweiyo thermoelectric kugona iri 0.5% ~ 1% yeiyo yakayerwa tembiricha mune pfupi nguva inopfuura 3 h. Inogona kushandiswa kutsvaga kwakateedzana mune dzimwe nhambo dzakakosha uko simbi thermocouple uye radiation radiation haina kukodzera. Seye yakanaka thermocouple zvinhu.
Pashure: Hafnium Boride Upfu, HfB2
Zvadaro: Titanium Boride Upfu, TiB2
Zirconium boride upfu
Zirconium boride upfu Mafekitori
Zirconium boride yeupfu Fekitori
Zirconium boride poda Mugadziri
Zirconium boride poda Vagadziri
Zirconium boride yeupfu Mutengo